Nooca iyo muhiimada ay u leedahay qaabeynta qaabeynta | Abuurista khadka tooska ah
Muhiimadda qorista qaabeynta (ilaha naqshadeynta)
Pablo Gonder | | Design Graphic, Fuentes, Khayraadka
Noocyada ku jira birta.
La suugaanta qoraalka naqshadeynta garaafka waxay had iyo jeer aheyd xulafo awood badan markay timaado gudbiyaan farriimaha. Laga soo bilaabo bilowgiisii ​​saxaafadda Gutenberg, qaab qoriddu waxay caddeeyeen inay aasaas u tahay isgaarsiinta garaafka, iyada oo ah aaladdii ugu horreysay ee loo isticmaalo cunsur ahaan isgaarsiinta macluumaadka labadaba xayeysiinta iyo warbaahinta kale.
Sababtoo ah taariikhdeeda oo dhan iyo awooda ay muujisay inay leedahay marka aan gudbineyno macluumaadka waxaan maanta ka heli karnaa ilo fara badan oo kala duwan oo webka ah halka soo degso farriimaha. Waa inaan maanka ku haynaa in nooc kasta loo qaabeeyey ujeeddo gaar ah (qaar badan oo iyaga ka mid ah hal adeegsi) waana taas sababta marka loo adeegsanayo xaraf-qoridda ay tahay inaan ogaanno waxa ay gudbineyso iyo ujeedkeenna ku jirta farriinta garaafka ah.
Nooca qoraalka wuxuu u dhaqmi karaa sida summad, mid sooc ah oo keenaya astaamo taxane ah oo ka tarjumi kara shucuurta iyo shucuurta kale marka uu la falgalayo qaataha farriinta, waa sababtaas darteed waa inaan ogaanno waxa aan rabno inaan gudbino iyo cidda fariinta loogu talagalay. Mararka qaar waxaan ka heli karnaa noocyo gaar ah oo loo sameeyay inay noqdaan muuqaalka shirkadeed ee astaan, tani waa kiiska astaamo astaan ​​u leh font si cad loogu talagalay astaantaada.
Marka laga hadlayo farta qoraalka waa inaan marwalba maskaxda ku haynaa aasaaska fariinta garaafka: akhriska iyo hawlgalka. Qaab qoraalka qoraalka waa inuu noqdaa mid la akhrin karo si farriinta loogu gudbin karo si hufan isla markaana isla markaasna looga dhex shaqeynayo luqadda garaafka ee la isticmaalay iyada oo aan la iloobin in la waafajiyo astaamaha aan dooneyno inaan ku matalno qaabeynta.
Waa muhiim in la ogaado qaar ka mid ah sifooyinka aasaasiga ah ee nooca qoraalkaiyo sida ay ula falgalaan aaladda garaafka ee ay ku taal, maxaa yeelay isku mid ma aha in la isticmaalo font leh jidh ballaaran (geesinimo leh) marka loo eego in loo adeegsado far qoraal ah oo jir yar (iftiin) leh, mid kasta oo ka mid ahi wuxuu gudbiyaa wax ka duwan wuxuu leeyahay farqi ka sareeya ama ka hooseeya farriinta gudaheeda. Isbarbardhiggu waa qiime aasaasi ah marka la samaynayo jaangooynta, jaangooyooyin sax ah oo qoraal ah waa in lagu dhisaa iyadoo lagu saleynayo baahida muhiimada qayb kasta oo ka mid ah qoraalka ku jirta naqshadeynta, isticmaalka farta yar ee qoraalka farqiga ayaa ugu saxsan. Haddii aan dooneyno inaan dhisno kala duwanaansho qaabeed sax ah, fikradaha aasaasiga ah qaarkood waa la isticmaali karaa marka lagu shaqeynayo qoraalka, sawirka hoose waxaan ku arki karnaa qaar ka mid ah heerarka ugu isticmaalka badan marka lala shaqeynayo qoraalka qaabeynta. Waxaan sidoo kale arki karnaa sida nooc kasta uu ula imanayo sifooyin taxane ah oo farriinta garaafka ka dhigaysa "ka sii fiicnaan" ama "ka sii xumaanaysa" haddii si qaldan loo isticmaalo.
Noocyada nooca qoraalka.
Kala sarreynta qaab-dhismeedka aasaasiga ah.
Tusaalaha adeegsiga qaab qoraalka saxda ah waxaa laga heli karaa boorarka filimka, taageeradani waxay siisaa tixraacyo badan oo kaladuwan oo laxiriira curinta qaab qoraalka. Boodhadh kastaa waxay leeyihiin shaqo tafaftiran oo aad u faahfaahsan si ay si sax ah u fuliyaan ujeeddadeeda Marka xigta waxaan arki doonaa tusaalooyin qaar ka mid ah adeegsiga qaab qoraalka qaabkan. Waxaad ku arki kartaa boorar badan oo filim ah tan web.
Muuqaaleed gaar ah oo u shaqeeya sidii summad iyo kala sooc.
Qaab qoraallada dhijitaalka ah oo lagu daray calligraphic taabasho shaqsiyeed.
Farqiga u dhexeeya qaab-dhismeedka iyada oo loo marayo midabka iyo cabbirka typeface-ka.
Intaa kadib (aasaasiga) dulmarka qaar ka mid ah qodobbada aasaasiga ah marka la isticmaalayo font waxaan bilaabi karnaa raadinta xarfaha xarfaha qaar ka mid ah baananka laga heli karo internet, ilahaani waa kuwo aad waxtar u leh marka la sameynayo. Qoraalkan waxaan ku muujin doonnaa mid ka mid ah (kan ugu caansan) DaFont.
DaFont waa mareeg websaydh ah oo leh noocyo fara badan oo noocyo kala duwan leh oo leh buug lagu dalbaday qaab, nidaamkani waa mid aad waxtar u leh soo degsashada noocyada si dhakhso ah maadaama aanan u baahnayn inaan nooc kasta oo diiwaangelin ah ka samayno shabakadda si aan u soo dejino font. Muuqaal kale oo muhiim ah, qaybta sharciga ah ee ku lug leh adeegsiga font uu abuuray qof saddexaad, ayaa lagu hubsaday webka mahadnaqa qaybta aan ku arki karno waxa xuquuqda lahaanshaha hantida gaarka ah nooc kasta oo font leeyahay. Heerka waxqabadka waa mid aad u faa'iido badan maxaa yeelay waxay leedahay mashiin raadin oo aan ku qori karno qoraal kasta oo aan ku aragno sida ay ugu egtahay xarfaha kala duwan, tani waa mid aad u faa'iido badan in la isku dayo in aan laga buuxin kombuyuutarkeenna xarfaha (badanaa waxay dhacdaa hehe). Marka xigta waxaan arki doonaa shaashadda shaashadda degelkan.
Soo qaado farta.
Macluumaadka aasaasiga ah ee la bixiyay ee ku saabsan adeegsiga qoraalka iyo muunadda ilaha qoraallada ee awoodda badan leh, waxaan diyaar u nahay inaan bilowno baaritaanka adduunka qoraalka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Fuentes » Muhiimadda qorista qaabeynta (ilaha naqshadeynta)
Maqaal wanaagsan, illaa iyo intaad ka helayso talo bixinta Dafont, oo ah qashin qashin qoris.
Ujawaab Peter NC
Juan | abuuro astaamaha internetka dijo
Haddii aad tahay agaasime hal abuur leh, sawir-bixiye, ama horumariyaha websaydhka - wax kasta oo edbintaada ah, qaab qorista waa qayb muhiim u ah naqshadeynta. Waxaa jira boqolaal nooc oo lacag bixin ah oo bilaash ah oo maalmahan la heli karo, laakiin markay tahay nooca farshaxanka, marna kama joogsan kartid barashadeeda ama hagaajinta xirfadahaaga qoraalka.
Sii wad inaad naftaada u hirgeliso heerka xiga.
Jawaab Juan | abuuro astaamaha internetka
Gabi ahaanba waan ku raacsanahay, qaab qorista waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee ku saabsan goobta naqshadeynta waana muhiim in la ogaado sida loo doorto noocyada qaabeynta naqshad kasta oo loo isticmaalo culeysyo kala duwan si loo abuuro isbarbardhig.
Ma i siin kartaa buugga-qoraaleedka
"Ii sheeg waxaad tahay waxaanan kuu sheegayaa magacaagu" logos?
U beddelka doollarka Mareykanka shaqooyin xadgudub ah